NY FANAHY AO AMIN'NY MPAHAIADY
Fotoana iresahana ny fandraisana ny Fanahy Masina ny andro Pentekosta, izay tsarovantsika ny nandrotsahana izany tamin’ny Fiangonana. Ny haiady dia ny antsoina mahazatra hoe « arts martiaux ». Misy fanahy hafa noho ny Fanahy Masina miasa ao anatin’ny mpahaiady, raha ity fijoroana vavolombelona nataona vehivavy mpiangaly izany.
Zanaka mpahaiady amina taranja maro i Hanna, Aziatika fiaviana. Ny taranja tennis no nampianarin’ny rainy azy, fa tsy ny haiady akory. Saingy noho ny fironan’ny fianakaviana tamin’ny haiaidy, dia nirotsaka nanao izany koa izy, ka ny Kung-fu no nifotorany. Ny fiarovantena sy ny fiarovana ny hafa no tena nanaovany izany.
Io « Mantra » io dia teny averimberina toy ny vavaka rehefa manao « méditation ». Avantana any amin’ny andriamanitra io, izay hafa noho ny Andriamanitry Rain’i Jesoa Kristy ivavahan’ny Kristiana. Asaina mifantoka amina olona fotsy voahombo amin’ny hazo fijaliana (crucifix blanc) ny mpanao « méditation », hoy ity vehivavy ity, sady mamerimberina ny « mantra » teo. Misy mihitsy ny mahita ara-panahy io « olona » ifantohany io mandritra izany, hoy izy.
Sarotiny dia sarotiny amin’ny fihetsika na « mouvement » atao rehefa manao ady ny maître, satria ny fahavitana tsara izany no hahazoan’ny mpianatra ny « pouvoir », fahefana diabolika, hoy ity vehivavy mijoro vavolombelona ity. Fihetsiky ny bibilava, vorompotsy, gidro, olona mamo izany atao izany, ary misy fihetsika koa atao mba hahazoana vehivavy hiaraka amin’ny « maître ». Ary tsy vitsy ny « maître » no manao « miaraka » amin’ny mpianany. Vitan’ny « maître » ihany koa ny mamoaka ny fanahiny hivoaka ny vatany, mba hiaraka amin’ireny vehivavy ireny, na ny « voyage astral ».
Nasaina nitondra fehikibo fotsy afatotra eo amin’ny tandrify ny foitra aho, hoy izy, mba hitazonana ny angovo (énergie) izay mipetraka eo amin’io faritry ny tena io tsy hiala. Ny teknikan’ny fifohana rivotra amin’ny orona sy ny kibo, fa tsy ny vava mihitsy, no ahafahana mitazona io angovo voatahiry ao amin’ny kibo io. Zava-dehibe loatra io fitanana ny angovo tsy ho lanilany foana io, amin’ny mpanao kung-fu, hoy izy.
Ampirisihana ny mpianatra haka rano an-tendrombohitra any, satria ambara ho madio tsara izany, sady feno kalsioma. Fantatro anefa, hoy izy, fa rano efa niantsoana fanahy hafa io, vao nampisotroana anay, ary nisy nasaina notehirizina tao anaty tavoahangy kely, dia nofehezina tao amin’ilay fehikibo eo amin’ny foitra. Nolazaina anay fa, rehefa mivoaka amin’ny tena ny angovo, dia mihalany io rano io, ka tsy maintsy ampiana indray.
Fanahy maro no nipetraka tao amiko, hoy izy, tamin’izany fanaovako ity haiady ity. Miendrika biby toy ny tigra, liona, gidro, bibilava ireo fanahy ireo, ary ny mpifehy azy rehetra dia ny dragona. Mora tezitra aho, hoy izy, rehefa misy zavatra tsy mifanaraka amin’ny saiko, na dia toa olona sariaka aza no ahitana azy ety ivelany. Mahateny marary mihitsy aho rehefa tezitra, ka tsy afaka mampiasa herisetra amin’ny olona.
Izany rehetra izany no nahazo ahy tamin’ny fanaovana haiady iray io. Ary tena ara-bakiteny tamiko ny voalazan’ny Lio 4 : 18 « fandefasana ny MPIFATOTRA ...sy hanafaka ny AMPAHORIANA ». Fanahy hafa mihitsy no nibaiko sy nangeja ahy nandritra zany fanaovana haiady izany, ary isaorako an’i Jesoa ny nanafahany ahy tamin’izany, ka nanomezany ny Fanahy Masina, hameno ny fiainako izay vaovao tanteraka, hoy i Hanna.
Vendredi 10 Avril 2020 - 2:33:24